राजा ज्ञानेन्द्र शाहले के-के गरे भारतमा ?:: Mero Desh
राजा ज्ञानेन्द्र शाहले के-के गरे भारतमा ?
Published on: ५ बैशाख २०७८, आईतवार १९:१५
‘५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झ’ण्डै दुई साता लामो भारत भ्र’मण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा समर्थकले स्वागत गरे । शाहलाई भारतको उत्त’रा’खण्ड स्थित हरिद्वा’रको म’हा’कुम्भ मेला आयोजक
‘समितिका नि’रञ्जन पीठाधीश्वर आचार्य महा मण्डले श्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरीले हिन्दू सम्राटको है’सियत मा सहभागी हुन २०७७ साल चैत १० गते पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रका आधारमा पू’र्वराजा शाह चैत २६ गते भारततर्फ प्रस्थान गरेका उनका सहयोगी फणिराज पाठक ले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘पाठका अनुसार २७ गतेसम्‍म दिल्लीमै बसेका शाहले केही वि’शेष भे’टघाट पनि गरे । २८ गते दिउँसो ह’रिद्वार पुगेका उनले भोलिपल्ट त्‍यहाँ रहेको माँ दक्षिणकालीको पूजा अर्च -ना गरे, जुन झन्डै ४५ मिनेट चल्‍यो ।
‘पूर्वराजा शाहलाई अखिल भारतीय अखाड़ा प’रिषदका अध्यक्ष महन्थ नरेन्द्र गिरी एवं मनसादेवी मन्दिर ट्रस्टका अध्यक्ष महन्थ रवीन्द्र पुरीलगायतका अन्य थुप्रै साधु सन्त ले उनलाई स्वागत गरे । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम मा अभि’नन्दन भयो ।
‘३० गते सोमबारे औंसीको दिन हरिद्वारको गंगा कि’नारमा हजारौं साधुसन्तका बीचमा उनले स्नान गरे । त्‍यस पछि अख’डादेखि गंगाको हर्किपौरीसम्‍म र’था’रोह’ण गरे । ३१ गते बिहान पतञ्जली योगपीठमा गएका उनले बाबा राम देवसँग ध्यान, योग र आयुर्वेदको महत्वबारे छलफल गरेका थिए ।
‘साँझ ह’रिद्वा’रमा गंगा किनारमा आरती गर्न पुगे । त्य’सक्र ‘ममा उनले आफूले पहिला पनि हरिद्वारको भ्र’मण गरेको, तर यसपालि कुम्भ मेलामा सहभागी हुन आएको प्रतिक्रि -या दिएका थिए ।
‘१ गते बुधबार सडकमार्ग हुँदै दिल्ली फर्किए का पूर्वराजा शाह ४ गतेसम्म त्यहीँ बसे । ५ गते बिहीबार को’रोना परी क्षण गराएका उनी आइतबार दिउँसो नेपाल फर्किएका हुन् ।